Chengetedza chengetedzo uye kuvanzika pane yako iPhone neBitdefender | IPhone nhau
Chengetedza chengetedzo uye kuvanzika pane yako iPhone neBitdefender
Jose Alfocea | | IPhone maapplication, IPhone Kuchengetedza
Iko kuchengetedzwa uye kuvanzika kweedu ega data uye neyedu ruzivo uye chiitiko zvakakosha. Zvizhinji zvehupenyu hwedu zvinoratidzwa uye zvakachengetwa pane yedu iPhone nenzira yekuti, kana ikawira mumaoko asiri iwo, inogona kuuraya.
Neraki, iOS ndiyo yakachengeteka nharembozha yekushandisa kunze uko, asi haina kukwana, kunyanya kana zvichitsamira pakubiwa kana kurasikirwa kwechigadzirwa. Kunyangwe mune idzi kesi, isu tine iCloud uye iyo Tsvaga Yangu iPhone chishandiso chinotibatsira kutsvaga kana, zvikatadza izvo, kudzima uye kuvharira zvese zviri mukati meiyo terminal uye nekudaro kuchengetedza ruzivo rwedu rwakachengeteka. Hatisi kuzokuudza mune ino positi kuti hachisi chishandiso chinoshanda, nekuti tingave tichinyepa, asi pamwe ungasarudza kuyedza imwe nzira iri yemahara uye inokupa iyo kutonga pamusoro pe data rako neruzivo: Bitdefender Nhare Yekuchengetedza ye iOS.
1 Bitdefender Mobile Security, imwe nzira yekuwana Yangu iPhone yeIOS
2 Chii chinonzi Bitdefender chinondipa
Bitdefender Mobile Security, imwe nzira yekuwana Yangu iPhone yeIOS
Hauna kumbobvira washandisa iyo «Tsvaga Yangu iPhone» chishandiso chinowanikwa mune chikamu cheICloud chenyaya dze iPhone, asi, kana ukasazviziva, chinhu chekuchengetedza icho chatinogona kuwana chishandiso chatinacho chakarasika, kunyangwe chakabiwa kana kuti takachisiya kumba kweshamwari. Uye kana zvisingakwanisike kuzviwana, tinogona kuzvivharira uye kudzima zvese zvirimo kuitira kuti chero munhu anochiwana, kana uyo akachiba, asakwanise kuwana data redu kana kurishandisa.
Naizvozvo, chishandiso chinoshanda kwazvo icho isu tese chatinofanira kunge takaita pane yedu iPhone. Zvisinei, Kana zvasvika pakuchengetedza uye kuvanzika, nei tichiganhurira kune chishandiso chimwe chete? Icho chiri chikonzero ichi icho nhasi ini ndichataura nezvacho Bitdefender Nhare Yekuchengetedza seimwe nzira kana semubatsiri kune chengetedzo iyo Apple yatotipa neIOS. Uye zvakare, chishandiso chemahara zvachose saka hazvizobhadhare iwe chero chinhu kurarama zvakadzikama.
Chii chinonzi Bitdefender chinondipa
Sezvatakaratidza pakutanga, pane yedu iPhone kana iPad isu tine huwandu hwakawanda hweruzivo, uye harisi chete data rine chekuita nemabhengi maakaundi, kiredhiti kana madhibhiti makadhi uye mapikicha ekuwana kune akawanda mawebhusaiti uye masocial network, asi isu zvakare taura nezvemifananidzo yedu nemavhidhiyo, anokwanisa kuburitsa ruzivo rwakawanda kupfuura zvataigona kufungidzira pakutanga, vanofambidzana, hurukuro dzakavanzika, maemail, zvinyorwa nezvimwe zvakawanda. Zvakanaka ipapo, Bitdefender Nhare Yekuchengetedza inopa kutonga pamusoro pezvese zvinyoronyoro ruzivo zvatakachengeta pane yedu iPhone kana iPad, kunyangwe kana chishandiso chingave chakarasika kana kubiwa.
Bitdefender inotenderera zvidimbu zviviri zvakakosha muhupenyu hwedu: kuona kuvanzika kweaccount yedu, uye chengetedza kuchengetedzeka kana pakuba kana kurasikirwa kubva kumagumo.
NeBitDefender iwe unogona ziva nguva dzese kana yako email account ichiri yakachengeteka. Kutenda kune tekinoroji yazvino kwazvo yemutungamiri wepasi rose mundima iyi seBitDefender, iwe unongofanirwa kusimbisa yako email kero uye Bitdefender Mobile Security ichaiongorora kuitira kuti uone kana chako zvakavanzika chakatyorwa uye kana chakatyorwa. ino ndiyo nguva yekuchinja password.
Kune rimwe divi, nekutenda kune ayo anti-kuba mabasa, uye yakajeka uye nyore-kushandisa-manejimendi pani, iwe uchave unokwanisa ari kure tsvaga, kiya uye bvisa yako iPhone kana iPad. Nenzira iyi iwe unoita shuwa kuti yako terminal haisvikike kune chero munhu anogona kuiwana uye, chokwadika, zvakare kune iye mbavha iye.
Sezvandambotaura pamusoro, BitDefender chishandiso chakasununguka chose iyo zvakare ine mukurumbira wekambani iyi inotungamira. Saka ndinokukurudzira kuti uedze. Izvo hazvizokutore iwe inopfuura miniti kuti uigadzirise, hazvizokudhara iwe euro, uye uchave wakanyanya kudzikama uye wakachengeteka.
Bitdefender Nhare Yekuchengetedzavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Chengetedza chengetedzo uye kuvanzika pane yako iPhone neBitdefender
Yakawanda kwazvo miromo sevhisi yekushambadzira
Inonakidza kwazvo asi mubvunzo wangu ndewekuti, chii chiri bhenefiti yeapp iyi? Kudzokorora ruzivo? Hapana chemahara uye iyi Anwendung ichatiwanisa imwe yemari kubatsirwa. Kune yangu chikamu, ini ndinopokana zvikuru kuti ndinoshandisa iyi mhando yeapp, ndoda kana ndikaipa kutonga kwese kweruzivo rwangu mundiro yesirivha.
Zvimwe zvinhu kana uchishanyira peji bhana rinowoneka pazasi, ndokumbira udzikise saizi yebhanhire iyo inoratidza kugamuchira makuki yakakura kwazvo. Chaizvoizvo kune kwangu chikamu ini ndinoona zvakadaro zvinogumbura. Deredza kukura kana kuisa X kuti ubvise mureza. Ndatenda
Ruzha rukuru uye verbiage uye mashoma nzungu ezangu zvekufarira.
Hapana chakakosha. Handifarire.
Ini ndanga ndisingazive kuti aya marudzi emaapplication aivapo uye kunze kwekunge aishanda neIOS, kubvira riini Apple payakapa mukana wakadzika kupinda muchirongwa kuti ndikwanise kuvhara kana kudzima chishandiso chiri kure kune vechitatu mapato?
Ini ndapererwa nechinyakare here kana kuti handi marongero avanoripenda?
Photomath inokutendera kuti uverenge kubva kune iyo kamera kamera
ITunes U Unganidzo Yakaendeswa kune iyo iOS Podcast App